Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo dhiso maamulka gobolka Banaadir si uu qeyb kaga noqdo maamul goboleedyadda dalka ka jira.
Xildhibaanada ayaa xusay in dhammaan Shacabka gobolka Banaadir ay la kulmayaan dhibaatooyin maamul xumo, islamarkaana ay ka shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa maamul u dooda xuquuqdooda.
Xildhibaanada kulanka yeeshay oo gaarayay ilaa 20 Mudane ayaa sheegay in qorshaha lagu dhisaayo maamul ay Shacabka doortaan oo Caasimadda laga dhiso uu marayo meel wanaagsan, islamarkaana dhawaan ay ka bixin doonaan faahfaahin dheeraad ah.
Cabdiqaadir Cosoble iyo Axmed Macalin Fiqi ayaa si wadajir ah u sheegay in dadka hadda joogga gobolka Banaadir ay yihiin kuwa aan ka shaqeynin danaha Shacabka Caasimadda,islamarkaana kaliyah ay fiirsadaan dantooda.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa Magaalada Muqdisho waxaa ka socday kulamo ay waddeen xildhibaano iyo qaar ka mid ah waxgaradka Caasimadda oo doonayay in la dhiso maamul wanaagsan oo Codka Shacabka ku yimaada.